အံ့သြဖွယ် Saint Lazarus အတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ? ဖျားနာသူများ၊ ခွေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
စိန့်လာဇရုထံဆုတောင်းခြင်း ရှေးအချိန်ကတည်းကဆင်းရဲသား၊ ဖျားနာသူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အထောက်အမကြီးအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ The စိန့်လာဇရုထံဆုတောင်းခြင်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောစွမ်းအားကြီးမားသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာအားဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှသူသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအံ့ဖွယ်ကောင်းသောသူတော်စင်တစ်ပါးမွေးဖွားခြင်း၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်အယ်လ်Rincónတွင်တွေ့ဆုံသောလိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကျူးဘားများ၏မဟာမိတ်နှင့်ဖြစ်လာသည်။
1.1 Saint Lazarus ကိုဆုတောင်းပါ
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌လာဇရုနှစ် ဦး ကိုတွေ့ရသည်။ ကောင်းကင်နှင့်ငရဲကိုယေရှုရှင်းပြသည့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူနှင့်လာဇရုပုံဥပမာတွင်အမည်ရှိသူဖြစ်သည်။
ဒုတိယလာဇရုသည်မာတာနှင့်မာရီယာတို့၏အစ်ကိုဖြစ်သည် သခင်ယေရှု၏အကြီးမြတ်ဆုံးအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခု၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် မြေကြီးပေါ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း။
သူ့ကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားသည့်တိရိစ္ဆာန်များကိုကူညီထောက်မသူအဖြစ်လူသိများသည်။ အမှန်မှာသူသည်ခွေးများကိုကာကွယ်ပေးသည်ဟုယုံကြည်ရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လူ့ယုံကြည်ချက်၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်၊
သူဟာအသက် ၆၀ မပြည့်မှီတိုင်အောင်အသက်ရှင်ခဲ့ပြီးသူ့အလောင်းကိုသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပြတယ် ရက်စက်တယ် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်ယင်း၏အတွင်းတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောရုပ်ကြွင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သောစကျင်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Saint Lazarus ကိုဆုတောင်းပါ
နာကျင်မှု၏နာကျင်မှုနှင့်ယေရှုခရစ်၏အလည်အပတ်ခရီးကိုသိသောသင်တို့၊ ဗေသနိရွာတွင်သင်၏အသက်တာကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးခဲ့သောသင်တို့၊ ဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွင်းသင်၏အကူအညီတောင်းခံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းပန်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းပန်မှုများကိုနင်ညင်သာသာကြိုဆိုသည်။
စိန့်လာဇရုအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ယေရှုခရစ်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကပါဌ်တော်မှတစ်ဆင့်သခင်ယေရှုထံ ၀ င်ရောက်ရန်ဤချိုမြိန်သောစကားများဖြင့်သင့်ကိုသင်္ချိုင်းမှလွှတ်လိုက်သောသင်တို့ခံစားရသည့်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အခိုက်အတန့်လေးပါ။ ငါတို့တောင်းပန်စကားကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချသောကြားဝင်ဖြန်ဖြေခြင်း။
ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလူသိရှင်ကြားအသိအမှတ်ပြုထားသည် စိန့်လာဇရု၏စွမ်းအား သူသည်ယုံကြည်ခြင်း၌ကြည်ညိုလေးမြတ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ့ကိုဆုတောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ဆုတောင်းခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် ဆုတောင်းခြင်း သူ၏ရာဇပလ္လင်မတိုင်မီမြင့်တက်လာခြင်းသည်ဆုတောင်းခြင်း၊ အချည်းနှီးသောဆုတောင်းခြင်းများမဟုတ်ဘဲသူ၏ရှေ့မှောက်တွင်မွှေးကြိုင်သောအနံ့တစ်မျိုးဖြစ်လာပြီးသူ၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ရောက်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းကိုဤသို့မပြုလုပ်ပါက၎င်းတို့သည်အချည်းနှီး ဖြစ်၍ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေ၊ ကျွန်ုပ်၏သန့်ရှင်းသောကာကွယ်သူ၊ သန့်ရှင်းသောလာဇရုသည်ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ၏၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ အိပ်မက်များနှင့်ဆန္ဒများ၊ သင့်ကိုနှိမ့်ချစွာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်မေးမြန်းသောအခါသင်၏လက်မှပေါ်ထွက်လာသောကောင်းမြတ်ခြင်း၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အစွမ်းထက်သောအကူအညီနှင့်ကရုဏာကိုတောင်းခံရန်သင့်ထံအသနားခံလာသည်။
သင်၏နှလုံးကိုအာဇာနည်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုဆုံးရှုံးပြီးသောနောက်၎င်းကိုပြန်လည်ပေးအပ်သူအားသင့်အသက်ကိုပေးဆပ်လိုသောဆန္ဒပြင်းပြမှုအတွက်ကျွန်ုပ်အားသင်၏အဖိုးထိုက်သောအဖိုးတန်သောစိန့်လာဇရုကိုပေးသနားတော်မူပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေ၊ အစ်ကိုနှင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ယေရှုရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒများကိုကြားဝင်ဖြန်ဖြေပါ။ သူ၏အဆုံးမဲ့ကရုဏာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပျက်အားလျော့မှုမှသက်သာရာရစေပါ။
သန့်ရှင်းသောလာဇရု၊ ဆင်းရဲသောသူတို့၏ဖခင်၊ ကျွန်ုပ်အားတောင်းပန်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်အားကူညီခြင်းရပ်တန့်ပါစေနှင့်။ သင်၏ဆုတောင်းခြင်းကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပြီးအမြန်ဆုံးဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ကောင်းချီးများနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုပေးပါ။ ။
သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဆုတောင်းပဌနာ ကျန်းမာရေးပြissuesနာတွေကအမြဲတမ်းအရေးတကြီးဖြစ်နေတယ် ဤအကြောင်းအရာသည်ဘုရားသခင့်အံ့ဖွယ်အမှုများစွာကသာကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိူင်သည်။
ချစ်ခင်ရပါသော Saint လာဇရု၊
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းခံစားရသောအခါ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါ။ သူ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသာတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ခက်ခဲကိစ္စများ၏ဂေါပက, ဆင်းရဲသော y စွန့်ပစ် အရာလည်းတိရိစ္ဆာန်များ, အထူးသဖြင့်ခွေးများပါဝင်သည်။ ဤသည်မှာအနည်းငယ်သာပြောရန်ရပ်တန့်သောဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လိုအပ်သောကြောင့်ခွေးများသည်သက်ရှိသတ္တ ၀ ါများ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်ဖျားနာခြင်း၊ စွန့်ခွာခြင်း၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်သက်ရှိသတ္တဝါများဖြစ်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ရှိ၍ မည်သူမျှအကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပံ့ ပေး၍ ဂရုမစိုက်သည့်အပြင်၎င်းတို့ကိုဒုက္ခရောက်စေသည်။
ဆုတောင်းပဌနာကို San Lazaro သဘောကျပါသလား ကျန်းမာရေးအတွက်?
၎င်းကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ မိသားစုနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မိသားစုအခြေစိုက်စခန်းများကိုခိုင်မာစေသည့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအပြင်နေ့စဉ်ခရီးစဉ်တွင်အကာအကွယ်ခံစားရသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်၊ ထိုအခက်အခဲအားလုံးကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသူ San Lázaroသည်သူတို့အတွက်ကြားဝင်တောင်းပန်သည် သူတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအပြည့်အဝရရှိပြီးအခက်အခဲများနှင့်စမ်းသပ်မှုများကြားတွင်အနားယူနိုင်သည်။